Vahaolana indostrialy |
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-05
Ny fanelingelenana herinaratra amin'ny tamba-jotra dia tsy fanelingelenana fotsiny; fandrahonana lehibe ho an'ny fahasalamana sy ny fiarovana ihany koa izy ireo. Raha tsy mandeha intsony ny herinaratra any amin'ny gara, dia hirodana ny rafitra afo, ny rafitra fiarovana, ny rafitra telecom, ny signal system ary ny angon-drakitra. Misafotofoto sy horohoro ny gara rehetra ...
Power Plants Generator Set Kent Power dia manome vahaolana matanjaka amin'ny famokarana herinaratra, hiantohana ny famatsiana herinaratra mitohy raha sanatria mijanona tsy manome herinaratra ny toby famokarana herinaratra. Ny fitaovantsika dia napetraka haingana, tafiditra mora foana, azo atokisana ary manome hery bebe kokoa. Herinaratra mahomby ...
Kent Power dia manolotra mpamokatra herinaratra diesel ho an'ny fampiasan'ny tafika mba hahafeno ny fepetra ara-teknikan'ny vondrona iraisam-pirenena. Ny fahefana mahomby sy azo itokisana dia tena ilaina mba hahazoana antoka fa ny iraka fiarovana dia vita amin'ny fomba mahomby araka izay azo atao Ireo mpiorina antsika dia ampiasaina ho fahefana voalohany any ivelany, ...
Tetikasa ety ivelany
Tetikasa any an-kalamanjana Generator nametraka vahaolana Kent Power ho an'ny tetikasa ivelany dia miantoka ny fahombiazan'ny fikarohana sy ny fizotran'ny fitrandrahana. Raha ny fahombiazana, ny fiasa ary ny fikojakojana ny génératera, ny tranobe ety ivelany dia manana fepetra hentitra amin'ny andiana generator. Kent Power manana ...
Solika famahanana herinaratra momba ny solika Kent Power dia manome vahaolana feno momba ny vahaolana fiarovana ny herinaratra ho an'ny sehatry ny solika. Matetika ny fitrandrahana solika sy gazy dia any amin'ny faritra lavitra misy faritra vitsy mponina, ary ireo tontolo iainana sy ireo tady herinaratra izay mety marefo indrindra amin'ny toerana toy izany ...
Hopitaly Generator nametraka vahaolana Ao amin'ny hopitaly, raha misy tsy fahombiazan'ny fampiasana azy, dia tsy maintsy omena hery vonjy maika hiarovana ny ainy sy ho enta-mavesatry ny sampana ao anatin'ny segondra vitsy. Ny fahefana ho an'ny hopitaly dia mamela tsy misy fahatapahana tanteraka ary tsy maintsy p ...
Ireo mpamokatra Telecom Power dia ampiharina indrindra amin'ireo toby telecom amin'ny indostrian'ny telecoms. Matetika, 800taona mpamokatra herinaratra no ilaina ho an'ny tobim-paritany, ary kojakoja mpamokatra 300KW ka hatramin'ny 400KW no ilaina amin'ny tobin'ny kaominaly, satria ny herinaratra miakatra mampitombo ny vahaolana Telecom Power Solutions ...
Manarona faritra maro an'isa ny tranobe, ao anatin'izany ny tranobe misy ny birao, ny trano fonenana, trano fonenana, trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, toeram-pivarotana, sekoly, sns. Builders Generator mametraka vahaolana amin'ny fananganana trano ...
Banks Generator Set Ny famokarana gazoala dia maneho famatsiam-bola be dia be sy ny fahatokisana azy, indrindra fa amin'ny fisian'ireo setran'ny generator maharitra, tena zava-dehibe izany. Ny banky dia manana solosaina mandroso sy fitaovana maro hafa, izay azo ampiasaina amin'ny ...
Vahaolana momba ny harena ankibon'ny tany Miorina matetika ny mpamokatra herinaratra dia loharanon-karena lehibe ho an'ny fiainana andavanandro, injeniera amin'ny toerana fitrandrahana. Ny vahaolana herinaratra Kent ho an'ny fitrandrahana dia miantoka ny fahombiazan'ny fikarohana sy ny fizotran'ny fitrandrahana. Manome rafitra herinaratra azo itokisana sy fandefasana haingana izahay, izay mety hampitombo ny fotoana ...